KNDO ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြ စောနယ်ဒါးမြ နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးစောဘာဝါးတို့ တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းခံရ၊ ဗိုလ်ချုပ်စောရှီးလေ့ကို KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာ - Myanmar Pressphoto Agency
KayinState KNDO KNU MPA Myanmar News
ကရင့်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KNDO) စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြ နှင့် သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီးစောဘာဝါးတို့ကို တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကာကွယ်ရေးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်စွဲဖြင့် စာထုတ်ကာ ထုတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသည့် အမိန့်ကြေညာချက်တွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ ၃၅ ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြ နှင့် သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီးစောဘာဝါးနှစ်ဦးကို တာဝန်မှရပ်စဲကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပါရှိသည်။
“ Investation team က စစ်ဆေးတဲ့ အချိန်မှာ တာဝန်က ခေတ္တရပ်တာပေါ့ အခု investigation team က သူ့တာဝန်ပြီးမြောက်တော့ တာ၀န်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပေါ့ “​ဟုKNU ဗဟိုနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့သည်။
KNDO ၏ ယာယီစစ်ဦးစီးချုပ်အသစ်ကို KNDO ရ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်စောရှီးလေ့ကို ခန့်အပ်ထားကြောင်း ယင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရုံး၏ ၁၀ ရက် ၁ လ ၂၀၂၁ ညွန်းကြားစာအမှတ် လခသ/န -၁၃/၀၁ ပါအရ မေလ ၃၁ ရက်နေ့၌ လူ ၂၅ ယောက် သတ်ဖြတ်သည့် ကိစ္စကို ကျူးလွန်သည့် KNDO ခေါင်းဆောင်နှင့် ရဲဘော်အား တာဝန်မှ ရပ်စဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU၏ ကာကွယ်ရေးဌာနခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး စောရောဂျာခင် ၏လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် စာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယမန်နှစ် ဇူလိုင်လက ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြ နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးစောဘာဝါးတို့ကို တာဝန်မှ ရပ်စဲကြောင်း KNU က ကြေညာခဲ့ဖူးပြီး ဗိုလ်ချုပ်စောနယ်ဒါးမြက KNU ၏ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သလို လက်မခံကြောင်းလည်း ဇူလိုင် ၁၁ က ပြောခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁နှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့က မြဝတီခရိုင် ဝေါလေမြို့နယ် ကနဲလေး-မော်ခီးသွား ကားလမ်း၊ အူးဟူချောင်း တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နေရာမှ အလုပ်သမားဆိုသူ ၄၇ ဦးအား KNDO က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် ၂၂ ဦးအား ပြန်လွှတ်ပေး ခဲ့ကာ ၂၅ ဦးအား အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အတွက်KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ကသေဆုံးသွားသူ အားလုံးမှာ အရပ်သားများမဟုတ်ဘဲ ဆောက်လုပ်ရေး အသွင်ဆောင်ထားသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်း ဖမ်းဆီးရမိချိန်တွင် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၏ ရာထူး၊ ရာခံ အဆောင်အယောင်များနှင့်တကွပြန်လည်ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ပြီး ၎င်းတို့၏ နယ်မြေအတွင်းသို့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
#MPA #KNDO #KNU #ကရင်ပြည်နယ် #အကြမ်းဖက်စစ်တပ်
KNDO Leader General Saw Nerdah Mya and Major Saw Barwah Suspended from Duty; General Saw Shee Lay Becomes KNDO Commander-in-chief
The Karen National Defense Organization (KNDO) commander-in-chief, general Saw Nerdah Mya and his colleague, major Saw Barwah have been suspended from duty, the Karen National Union (KNU) department of defense issued withaletter on January 17.
In the order of statement written in Karen language, at the 35th Central Committee of the Karen National Union (KNU), it was decided that general Saw Nerdah Mya and his colleague major Saw Barwah were ceased from duty.
“When the investigation team was carrying out the task, (they) were momentarily suspended, and after the investigation team finished the task, (they) have been ceased from duty”, confirmed one close to KNU central.
As KNDO’s temporary commander-in-chief, the KNDO vice commander-in-chief General Saw Shee Lae has been appointed, the statement said.
According to the instruction letter no. Lakhatha/Na -13/01 issued on 10/01/2021 of the KNU General Secretary Office, KNDO leader and comrade who committed the murder of 25 people on May 31 were ceased from duty, stated in the letter issued with the signature of KNU defense leader, major Saw Raw Jakhin.
Last year July, KNU declared the cessation of general Saw Nerdah Mya and major Saw Barwah from duty and general Saw Nerdah criticized the decision of the KNU and also said on July 11 that he did not accept it.
On May 31 of 2021, last year, 47 construction workers from Oh Ho stream bridge construction site on Kane Lay – Maw Khee highway in Wawle township of Myawaddy district were arrested, 22 were released; and as the coup SAC reported it with photo evidences of 25 workers massacred, the commander-in-chief explained that the killed were not civilians but members of the SAC military pretending to be working at construction and the positions and equipment of the SAC troops at the time of arrest were also exposed and it was also said there were investigations into the area.
#MPA #KNDO #KNU #KarenState #TerroristMilitary